Umkhiqizi kanye nomphakeli waseChina ongu-Hydraulic | I-Hanrui
Cindezela umfutholuketshezi: Umshini wokucindezela umfutholuketshezi ungomunye wemishini yokuhlola ukuqhuma kwamapayipi.
Imikhiqizo yethu yemishini yokuhlola i-hydraulic isetshenziswe ezinkampanini eziningi, futhi yazuza ukunconywa nokuqashelwa kwamakhasimende ngobuchwepheshe obuphambili nokusebenza okuthembekile.
Izakhiwo zokukhiqiza ezihlanganisiwe:
Nge-lathe ye-CNC, bonke opharetha badlulile ukuqeqeshwa kobuchwepheshe obuchwepheshe futhi basebenza ngokuhambisana ngokuqinile nezinga lebhizinisi kanye ne-ISO9001 ejwayelekile.
Independent spray idokodo ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo uhlangabezana nezidingo zokuvikelwa kwemvelo.
AbakwaSuzhou Hanrui Electric Co., Ltd. bazuze idumela elihle ngomshini waso ozinzile wokubacindezela, ipayipi elijwayelekile le-ASTM, intengo yokuncintisana kanye nensizakalo enhle yokuthengisa ngemuva (ikakhulukazi ukunikezwa kwezingxenye zezingxenye zokungcebeleka). Njengamanje, amakhasimende avela e-Asia, eMiddle East, eNyakatho Melika naseYurophu asebenzisane nathi, futhi imishini yokuhlola / yokushaya isitampu engacindezeli isize kakhulu abasebenzisi emncintiswaneni wemakethe.
Isetshenziswa kakhulu ekuhlolweni kwepayipi okufana nepayipi lensimbi elingenamthungo, ipayipi lensimbi engagqwali, ipayipi le-titanium ingxubevange, ipayipi lethusi nepayipi le-aluminium. Inkolelo enkulu yenkampani yethu ukukhiqiza umshini wokubacindezela ukunikeza imishini yokuhlola esezingeni eliphakeme nekhwalithi ephezulu ukuvala igebe emakethe. Umshini wokubacindezela ungahlukaniswa wohlobo oluzenzakalelayo nohlobo lwencwadi. Uhlobo lwemanuwali lungahlola amapayipi amane ngasikhathi sinye, kepha ludinga umsebenzi wezandla. Ukubeka, ukubeka uphawu, ukucindezela nokucindezela kuyazenzakalela. Ubude bepayipi bungashintshwa ngo-2-15m ukuhlangabezana nezidingo zamapayipi ahlukene angenamthungo ikhasimende.
Uhlobo oluzenzakalelayo: ithubhu eyodwa kuphela engahlolwa ngasikhathi. Ishubhu lingena ngokuzenzakalela ku-rack, licubungula ngokuzenzakalela izinto zokwakha, lihlunge ngokuzenzakalela, izikhundla, lihlanze, izimpawu, izibopho kanye nokucindezela konke ngokuzenzakalela; ingxenye yokubeka engezansi ihlunga ngokuzenzakalela imikhiqizo eyiqiniso futhi enesici. Idlala indima ebalulekile ekukhiqizeni kwangempela. Enye ukonga izindleko, kepha ukonga abasebenzi nokwenza ngcono izinga lokuvuselelwa kwamapayipi. Umshini wokubacindezela owenziwa yinkampani yethu usetshenziswa kakhulu ekutholakaleni kwekhwalithi yomkhiqizo wabenzi bamapayipi, futhi uyisidingo esibalulekile nesibalulekile semishini yokuqhumisa. Manje ithuthukiswe ngempumelelo: uhlobo lwenqubo nohlobo oluzenzakalelayo.
Langaphambilini Isiguquli somoya
Olandelayo: Umshini we-Rt-50fa Precision Double-Head Chamfering Machine / Round Tube Chamfering Machine
ICarbon Steel Tube umfutholuketshezi Cindezela
Ovundlile umfutholuketshezi Cindezela
Isisetshenziswa se-Hydraulic Press
Seamless Pipe umfutholuketshezi Cindezela
Ipayipi le-Hydraulic Press elingenalutho
I-Titanium Tube Umfutholuketshezi Cindezela